Maxay yihiin astaamaha iyo daaweynta naaso-nacaybku bisadaha? | Bisadaha Noti
Monica Sanchez | | Cudurada
Inaad aragto bisad umul ah waa khibrad aad u wanaagsan, laakiin marka laga reebo ka fekerida tirada badan ee hore u jirtay ee bisadaha, qaar badan oo ka mid ah ayaan waligood fursad u heli doonin inay ku farxaan, sidoo kale waa inaad xusuusataa caafimaadkeeda.
Uurka kadib waxaa laga yaabaa inay jiraan dhibaatooyin qaar, markaa markan Waxaan kaala hadlayaa waxyaabaha ku saabsan mastast-ka bisadaha.
2 Waa maxay astaamuhu?
3 Sidee cudurka loo sameeyaa?
4 Waa maxay daaweynta?
Mastitis waa caabuq ku dhaca qanjidhada naaska taas oo ku dhici karta sababahan midkood:
Dhimashada bisadaha qaar
Naas-ka-joojinta kadiska ah
Mararka qaarkood, waxay noqon kartaa kiiska inuu jiro infekshan, oo ah bakteeriyada enterococci, streptococci, staphylococci iyo Escherichia coli bisadaha ugu saameynta badan.
Calaamadaha mastitis ee bisadaha waa kuwan soo socda:
Kittens ma helaan miisaan ku filan (5% culeyska dhalashada maalintii ka badan)
Abuurista maqaarka ama gaangiska
Bararka dhexdhexaadka ah ee qanjidhada naasaha, oo umuuqda mid adag oo mararka qaarkood nabarro leh
Caano badan oo muuqaal ah
Dhiig bax dhiig bax ah ama dheecaan dheecaan leh
Sidee cudurka loo sameeyaa?
Markay bisadeena yeelato mid ama in kabadan astaamaha aan kor kusoo xusnay, waa inaan u geynaa dhakhtarka xoolaha sida ugu dhakhsaha badan. Halkaas ayey kaa dhigi doonaan a cytology ee dheecaanka naaska, dhaqanka bakteeriyada caanaha iyo baaritaanka dhiigga.
Haddii cudurka la xaqiijiyo, waxa aad sameyn doonto waa ku siiyo antibiyootiko 2-3 toddobaad. Kaliya kiisaska naaso-mareenka leh gangrene, nuujinta eeyadu waa in la joojiyaa, bisadana waa in laga qaadaa unugyada necrotic-ka ah. Xaaladaha badankood saadaashu way fiican tahay.
Si kastaba ha noqotee, waxa ugu fiican ee la sameeyo si looga fogaado mastitis waa tuurid bisadda. Tani waxay sidoo kale ka hortageysaa qashinka aan loo baahnayn iyo kuleylka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Cudurada » Mastitis bisadaha
Leedhka 'Acral lick granuloma' ee bisadaha